कल्पनालाई आमाले दिइन् विवाहको स्वीकृति, कल्पना लाजले भुतुक्कै, अन्तर्वार्ताभरि रोएरै बित्यो! (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > कल्पनालाई आमाले दिइन् विवाहको स्वीकृति, कल्पना लाजले भुतुक्कै, अन्तर्वार्ताभरि रोएरै बित्यो! (भिडियो हेर्नुस्)
admin November 17, 2020 भिडियो, समाचार	0
काठमाडौ । कल्पना दाहाल गायीका हुन् । एबीसी टेलिभिजनको इन्द्रेणी कार्यक्रमवाट चर्चित भएकी कल्पना पहिलो पटक आमासंग मिडियामा सार्वजनिक भएकी छन् । रमेश प्रसाईसंग दोहोरी गाएपछि कल्पना चर्चित भएकी हुन् । पछिल्लो समय रमेश प्रसाई र कल्पना दाहालको जोडीलाई लिएर मिडियामा निकै चर्चा हुने गर्दछ । उनीहरुको टिकटक पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । भिडियो लालिगुराँसमा छ ।
रमेशसंग कल्पनाको विवाहलाई लिएर कल्पनाको आमाले पनि स्वीकृति दिएकी छन् । कल्पनाको रोजाई रमेश हुन् भने आफुलाई कुनै गुनासो नभएको उनको भनाई छ । उनीहरुको टिकटक पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको छ ।
उनीहरुको दोहोरी र टिकटक हेरेर वास्तविक जिवनमा पनि जोडी बन्न धेरैले सुझाव दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा र मिडियामा निकै खुसी देखिने कल्पनाको वास्तविक जिवनमा भने निकै ठूलो दुख परेको छ । आफ्नो जवान दाई गुमाएकी कल्पना भक्कानिएकी छन् ।
अरुले घर सजाएर आफ्ना दाईभाईलाई सप्तरंगी टिका लगाएको देख्दा कल्पनाको मन भक्कानिन्छ । वृद्ध अवस्थामा ३२ वर्षको जवान छोरा गुमाएकी कल्पनाकी आमा पनि पहिलो पटक मिडियामा आएकी छन् ।
हामीले कल्पना र रमेश को बिहे हुन्छ त् भनेर उनकी आमालाई सोध्दा मेरो तर्फबाट राजि छु अब कल्पना र रमेश ले नै निर्णय गर्ने हो भन्दै उनकी आमाले शुभकामना समेत दिएकी छिन एता कल्पनाले पनि भाग्यमा लेखेको छ भने बिहे हुने समेत बताएकी छिन।कल्पनाले आफ्नो दाईलाई सम्झेर रुन पुगिन।
२ लाख दिंदा पनि विष्णु माझिको अनुहार हेर्न नपाएका यी गायक, यसो भन्छन्
के यसपालि नेकपा विवादमा ‘मध्यमार्गी’ नेताहरू पनि निराश देखिएका हुन्?
माओवादी मन्त्री रहेको मन्त्रालयको कार्यालयमा लालबाबु पण्डितको छड्के, त्यसपछि भयो बबाल
विवादपछि गायक पशुपति शर्मा पहिलो पटक न्यूज–२४ टेलिभिजनमा -भिडियो सहित
जनताको चर्को बिरोधपछि हुदैछ राजधानीमा यस्तो परिवर्तन… अब यस्ता हुने छैनन्